Amantombazana asemthethweni kuSuku lwe-ICT: Sincokola noFran del Pozo, osuka kwiKhowudi.ORG | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | 22/04/2021 13:47 | ngokubanzi, Izaziso
Namhlanje, nge-22 ka-Epreli 22, usuku lwaseburhulumenteni lwamantombazana aphesheya kwi-ICT lubhiyozelwa, usuku olubalulekileyo ukuba sithathela ingqalelo umsantsa obalulekileyo wesini owenzeka kutshintsho nakwinkqubo yedijithali, yiyo loo nto sifuna ukukuxelela ukuba ikhowudi iqulathe ntoni? I-ORG kunye nendlela umsebenzi wayo onceda ngayo amawaka amantombazana kwihlabathi liphela nakweyiphi na indawo yekhaya ukuba bafunde ngakumbi ngetekhnoloji entsha ngakumbi inkqubo. Sincokole noFran del Pozo, intloko yeCode.ORG eSpain.
KwiActualidad Gadget, sihlala sithembekile kwimigaqo yokuziphatha yethu yokuhlela, siyaqhubeka nokubhalwa ngokupheleleyo kodliwanondlebe esikwenzayo.
Kwintoni? Ikhowudi.ORG ithathe isigqibo sokuthatha inxaxheba kulwahlulo lwedijithali phakathi kwabantu abancinci kwaye babe yinxalenye yolu tshintsho?
ICode.org yazalwa ngo-2013 e-United States ngenjongo yokuba wonke umntwana kwisikolo ngasinye ehlabathini abe nethuba lokufunda ikhowudi.
Imodeli yempumelelo eqinisekisiweyo. Ngaphezulu kwe-40% yabafundi baseMntla Melika baneakhawunti kwiKhowudi.org, kunye nootitshala be-2MM kunye nabafundi be-55MM kwihlabathi liphela (isiqingatha sabo singabafazi).
Iprojekthi iqhutywa ziinkokeli zehlabathi, ezopolitiko, ezentlalo kunye nezoqoqosho, NjengoBill Gates, uJeff Bezos, uSatya Nadella, uEric Schmidt, uTim Cook, uBarack Obama, uBill Clinton, uRichard Branson, uBONO, okanye abaphathi beeDyunivesithi zaseStanford, iHarvard okanye iMIT MediaLab phakathi kwabanye abaninzi ... kwaye exhaswa ngezimali zezinye zeenkampani ezinkulu emhlabeni, ezinje ngeGoogle, Microsoft, Amazon, General Motors kunye neDisney.
Isebenza njani iCode.ORG ukunceda amantombazana amancinci ukuba afunde iinkqubo?
Sikunye neKhan Academy, silona qonga likhulu loqeqesho kwihlabathi ngokwenani labasebenzisi. Sinomxholo wasimahla oguqulelwe kwiilwimi ezingaphezu kwama-60 zabafundi abasusela kwiminyaka emi-4 ukuya kweli-18 ubudala. Ukongeza, sisoloko sikhankasa ukukhuthaza ukufikelela kulutsha kwiinkqubo.
Umahluko wethu omkhulu kukuba siliqonga elivulekileyo ngokupheleleyo kwaye likhululekile naphi na emhlabeni. Imixholo ijolise ekuqeqesheni amakhwenkwe namantombazana ukususela kwiminyaka yobudala, (i-40% yabafundi baseMelika kweli qela leminyaka ngabasebenzisi beCode.org) ngezifundo ezahlukeneyo kuxhomekeke kubudala bokufunda. Kwelinye icala, ikwajolise kootitshala, njengomboneleli ophambili woqeqesho kunye nesixhobo sokuphuhlisa iinkqubo zabo zemfundo. Ngamafutshane, kwiCode.org sikhuthaza imodeli ebandakanyayo nefanelekileyo, kubo bonke, ngenjongo yokuphelisa ulwazi, isini kunye nokhuphiswano olunokubakho.
Intoni? Ukubaluleka kweenkqubo kunokuba nakho emsebenzini wakho nakwikamva lakho buqu?
Ngandlela thile, yonke imisebenzi iya kudibana netekhnoloji kunye nekhompyuter. Nangona kunjalo, uninzi lwabemi alwazi ukuba yintoni inkqubo kunye nokubaluleka okuza kubakho kwikamva labantwana babo. Ngapha koko, ukufundisa isayensi yekhompyuter kubalulekile kwikamva labantu abancinci nakukhuphiswano lwaseSpain.
Kubalulekile ukulungelelanisa uqeqesho nengqesho njengoko uqoqosho lweli hlabathi lusenza izinto ezintsha.
Ucinga ukuba sisiphi isizathu sokuba inani lamakhosikazi afundayo kwaye azinikele kwi-computer yesayensi kunye netekhnoloji liye lehla kwihlabathi eliya lisanda ngokwamanani?
Ndicinga ukuba kukho ingxaki yestereotype eyimfuneko ngokupheleleyo ukuba idilize ijikeleze ubunzima bemisebenzi yobuchwephesha kunye nokungabikho komthamo wabasetyhini. Ngokwenkcubeko, yayiqondwa into yokuba eyona misebenzi inzima, efuna ukuzinikela ngakumbi kunye nomzamo, ayenzelwanga abantu basetyhini kwaye yiyo loo nto neentsapho zicebisa iintombi zazo ukuba zijolise kumasebe ezentlalo ezenzululwazi, njengamayeza. Imithombo yeendaba idlala indima ebalulekileyo ekupheliseni umsantsa wesini. Kubonakalisiwe ngakumbi ukuba amadoda nabafazi banesakhono ngokulinganayo kwaye kufanelekile ukubandakanya abantu basetyhini kwinzululwazi nakwitekhnoloji, hayi eyomcimbi wobulungisa okanye ulingano kodwa ngokusebenza kakuhle nangokukhuphisana.
I-Code.ORG ixhasa njani zonke iiprojekthi zayo zasimahla?
Ukusuka kubaxhasi bethu, ubukhulu becala ziinkampani ezinkulu zobuchwephesha behlabathi, kunye namaphilanthropist amakhulu eMntla Melika. Kancinci kancinci sijonga imithombo emitsha yenkxaso-mali kunye nabaxhasi abavela kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi kuba siyiprojekthi yokwenyani yehlabathi.
Iilwimi ezimbini ezichaphazela ubuchwephesha ziluchaphazela njani ulwahlulo lwedijithali kwaye iCode.ORG izimisele njani ukulwa nalo?
Ichaphazela ngokupheleleyo kuba ukungangqinelani noqeqesho nengqesho kuya kuvelisa intsilelo yeengcali, kuya kusiba nzima ngakumbi ukukugubungela. Ichaphazela ngokwengqesho, intlalontle, ukhuphiswano kunye nemveliso. Sishiywe lixesha ngesiNgesi kwaye asinakukwazi ukwenza into efanayo ukuba yenzeke kuthi ngenkqubo (kunye nokucinga okuhlanganayo).
Ngaba ucinga ukuba ulutsha lwanamhlanje luneengxaki zokuyila, ukucinga nzulu, kunye nokusombulula iingxaki?
Andinayo idatha yokuphendula loo mbuzo. Kodwa ukuba ndingatsho ukuba xa sisenza iinkqubo sikhulisa ukucinga ngokubambisana kwaye oku kuthanda ukuphuculwa kolunye uthotho lwezakhono ezinje ngengqondo, ukucinga okunzulu okanye ukusombulula iingxaki. Asazi ukuba iyakuba yintoni imisebenzi yexesha elizayo, kodwa siyazi ukuba zeziphi izakhono abaya kuzifuna kwaye, phakathi kwabanye, zezi.
Ukubuyela emva kuSuku lwaMazwe ngaMazwe lwaMantombazana, ngaba ikhowudi ye-Code.ORG yokwenza imisebenzi okanye amaphulo agxile kulo mbhiyozo?
Hayi ngokukodwa kuba sihlala sikhankasa, kuba yinxalenye ye-DNA yethu yokongeza amantombazana.
Ucinga ukuba ukungena kweCode.ORG kumazwe asendleleni zophuhliso kunokuba yintoni?
Afrika umzekelo ilizwekazi elinobuchule obukhethekileyo. Kumazwe asakhasayo sisebenza ngokubambisana nemibutho yamanye amazwe esebenza ebaleni, bakunye noorhulumente basekhaya, abona bahlobo bangcono kwezi geographies.
Siyabulela iqela leKhowudi.ORG ngakumbi uFran del Pozo ngokuthathelwa ingqalelo kwabo nangokuphendula yonke le mibuzo ngaphandle kokuchasa. Siyathemba ukuba siza kuba nakho ukufaka isandla kwingqolowa yethu yesanti kulwandiso lwenkqubo phakathi kwabona bancinci, ngakumbi Ukophula izithintelo ngokwesini kwicandelo ekungafanelekanga ukuba linalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Amantombazana asemthethweni kuSuku lwe-ICT: Sincokola noFran del Pozo, osuka kwiKhowudi.ORG
IHuawei ivuselela ilaptop yayo ye-MateBook D 15 ngeetshipsi ezintsha ze-Intel